Asparagus, ब्रड बीन र बेकन केक | ThermoRecines
सुरूवात65 मिनेट4 व्यक्ति250२ क्यालोरी
यस समयमा बजारमा जान कत्ति रमाईलो हुन्छ जब वसन्तले हामीलाई फलफूल, तरकारीहरू र तरकारीहरू दिन्छ जत्तिकै धनी विस्तृत सिमी वा शतावरी.
शतावरी संग खाना पकाउने छ धेरै सजीलो किनभने तिनीहरू कुनै पनि थालमा राम्रोसँग जान्छन्, यो चामल, पास्ता वा हुन भर्खरै उमालेको। तर मेरो केसमा सिमीहरू मेरो खानामा समावेश गर्नाले पहिले नै मलाई बढी लागत आउँछ किनभने मेरो भण्डार सानो छ। त्यसैले जब मैले यो नुस्खा भेट्टाएँ म हिचकिचाउँदिन।
यो नुनिलो केक कभर गर्न को लागी एक बुद्धिमानी विकल्प हो बेकन स्लाइसहरू किनभने यसले एक धनी स्वाद दिन्छ, खराब कुरा के छ भने सन्तुलित आहार कायम गर्न हामी यो खानालाई दुरुपयोग गर्न सक्दैनौं।
1 Asparagus, ब्रड बीन र बेकन केक
तयारी समय: 44M
Led०० ग्राम शेल्ड ब्रड गेडाहरू
Green हरियो शतावरी
Grated Parmesan को 30 g
बेकनको7लामो स्लाइसहरू
नुन, मरिच र गुलामी
पानीमा गिलास भर्नुहोस् दोस्रो मार्क सम्म। गर्मी को लागी Minutes मिनेट, १००º, गति १। समय पछि, टोकरीलाई सिसाका साथ सिसाको भित्र राख्नुहोस्। नुन र पकाउनुहोस् Minutes मिनेट, १००º, गति १।
यसैबीच, शतावरीलाई सफा गर्नुहोस् र रेशेदार भाग खारेज गर्नुहोस्। तिनीहरूलाई वरोमामा राख्नुहोस्। जब समय सकियो, सिमीहरू टोकरीमा राख्नुहोस् र वरोमालाई स्थितिमा राख्नुहोस्। पुनः शेड्यूल Minutes मिनेट, १००º, गति १।
ओभनलाई १º०º मा गरम गर्नुहोस् र बेकिंग कागजको साथ लामो मोल्ड लाइन गर्नुहोस्। यसलाई बेकनका स्लाइसहरूसँग हल्का साघुँरो गरी घुमाउनुहोस् र पक्षहरूबाट फैलियो।
त्यसपछि वरोमा र टोकरी हटाउनुहोस्। मोटो छाला हटाएर, फराकिलो सिमीको बोक्रा ताछ्नुहोस्। उनीहरूलाई खाली गिलासमा राख्नुहोस्, साथै कुटीर चीज, अण्डा र परमेसन। नुन र मरिच संग सीजन, एक सानो रोमेरी छर्कने र को समयमा पिट्न Seconds० सेकेन्ड, गति 15।
ध्यानपूर्वक हामीले तयार पारेको मोल्डमा आधा क्रीम खन्याउनुहोस्। Asparagus राख्नुहोस् कि तिनीहरूले सम्पूर्ण सतह कवर। बाँकी क्रीमले भर्नुहोस् र मोल्डबाट फैलिएको बेकन स्लाइसको अंशले कभर गर्नुहोस्।
N 35 र minutes० मिनेट बीचमा ओभनमा राख्नुहोस् वा स्टिक सफ्ट नहुन्जेल तपाईले छेड्नुहोस्।
एकपटक पकाइएपछि ओभनबाट हटाउनुहोस् र यसलाई अलि चिसो हुन दिनुहोस्। त्यसो भए अनमोल गर्नुहोस् र यसलाई एउटा राम्रो ट्रेमा राख्नुहोस्। रोजमेरीको स्प्रिगको साथ गार्निश र सेवा गर्नुहोस्।
थप जानकारी - Parmesan संग हरियो asparagus
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: १ १/२ घण्टा भन्दा कम, वरोमा रेसिपीहरू
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » समयको लागि » १ १/२ घण्टा भन्दा कम » Asparagus, ब्रड बीन र बेकन केक
म सोध्न चाहान्छु म केटेज पनीरको विकल्प लिन सक्दछु? उदाहरण को लागी?
तपाईं यसलाई रिकोटा, कुटीज वा मस्करपोन चीजको लागि प्रतिस्थापन गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइँ यसलाई क्रीम चीज वा क्रीमको साथ पनि बनाउन सक्नुहुन्छ तर परिणाम समान हुनेछैन किनकि तपाइँ स्थिरता धेरै फरक पार्दै हुनुहुन्छ।
चिकन टिक्का मसला